KDE Kunyorera 19.04 yatopinda beta vhezheni yekuyedza | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura ivo vagadziri vari kutarisira iyo KDE chirongwa chakazivisa kuvhurwa kweiyo beta vhezheni yeiyo ichave inotevera yakavhurwa sosi software suite KDE Kunyorera 19.04.
Chii chichava vhezheni itsva ye KDE Kunyorera 19.04 yanga iri mukuvandudza kubvira kutanga kwaKurume uye ikozvino beta vhezheni yacho yakagadzirira kuyedzwa neruzhinji, kubvumira nharaunda kuti inzwisise maficha nyowani nekuvandudza nekukurumidza sezvazvinogona, uye kubatsira timu yekusimudzira kuona mhando yemushandisi ruzivo uye kusunungura iyo vhezheni.
1 Chii chinonzi KDE Zvishandiso?
1.1 Nezve iyo nyowani beta yeKDE Kunyorera 19.04
2 Chii chitsva mune ino beta vhezheni yeKDE Kunyorera 19.04?
2.1 Iyo yekupedzisira vhezheni ichave yakagadzirira muna Kubvumbi 18
Chii chinonzi KDE Zvishandiso?
Kune avo venyu vasati vazivana neKDE Zvikumbiro, tinogona kukuudza izvozvo aya seti eanowirirana kunyorera uye maraibhurari akagadzirwa nenharaunda yeKDE, ayo anonyanya kushandiswa paLinux-based operating system, asi mazhinji eaya mafomu ari muchinjika-chikuva uye anoburitswa pane yakajairwa Launcher.
Yaimbove iyo KDE application package yaive chikamu cheiyo KDE software yekuvaka.
Mienzaniso yezvakaratidzwa zvinoshandiswa mupakeji zvinosanganisira Dolphin maneja wefaira, Okular gwaro rinoona, Kate chinyorwa mupepeti, Arky Konsole terminal emulator faira chishandiso pakati pevamwe
Nezve iyo nyowani beta yeKDE Kunyorera 19.04
KDE Kunyorera 19.04 iyo yakapinda muchikamu chekuvandudza beta, pamwe chete nacho izvi zvinoratidza zvakare kuti ndeapi matanho ekuzvidzivirira uye mabasa echando, zvinoreva kuti timu yeKDE inozo tarisa chete kugadzirisa zvese izvo zvikanganiso zvinoitika.
Izvi kuitira kuti iyo yekupedzisira vhezheni ibve mu "kushomeka" uye polisha iyi vhezheni, kuendesa yakagadzikana yekupedzisira vhezheni.
Iyo software package KDE Kunyorera 19.04 inosanganisira akati wandei akavhurwa masosi ekunyorera ayo akakosha mukushanda chaiko kweiyo KDE Plasma desktop desktop.
Ehezve, izvi zvinoshandiswa zvinogona zvakare kushandiswa mune mamwe madesktop mamiriro.
Nezvo, timu yekusimudzira yakaratidza zvinotevera:
"KDE Kunyorera 19.04 inoda kuyedzwa kwakawanda kuchengetedza uye kugadzirisa mhando uye ruzivo rwevashandisi.
Vashandisi chaivo ndivo vatsoropodzi chaivo vanodiwa kuti vachengetedze mhando yepamusoro mukuenderera mberi kwekuvandudzwa kweiyo KDE chirongwa uye izvi zvakadaro nekuti vanogadzira havagone kuyedza kumisikidzwa kwese
Chii chitsva mune ino beta vhezheni yeKDE Kunyorera 19.04?
Shanduko zhinji dzakaitwa muKDE Zvikumbiro 19.04 software suite, asi mune zvimwe zvakakosha, tinogona kutaura zvimwe zvezvinhu zvitsva zvakachengeterwa kuburitswa uku.
Pakati pavo tinogona kusimbisa kugona kutanga iyo Dolphin faira maneja uchishandisa iyo pfupi nzira ye keyboard yepasi rose Super + E uye inotsigira screen kutora faira zita rekutarisa muChishamiso.
Izvo zvakakoshawo kutaura kuti iyo Dolphin's maneja maneja inozopedzisira yaratidza iwo iwo marongero akafanana kune ese maforodha nekutadza
Kune rimwe divi, isu takaonawo kuti iyo turu yekushandisa zvino icharatidza monochrome icon nemazvo. Zvakare, iwe unogona kushandisa zvakavanzika zvinhu nekuzvironga patsva mu "Nzvimbo" pani.
KDE Kunyorera 19.04 inotsigira matatu ekuburitsa ekuchengetedza kusvika Chikunguru 11, 2019.
Yekutanga, KDE Kunyorera 19.04.1, uye ichave yakarongwa muna Chivabvu 9, 2019. Iwo mamwe maviri, KDE Kunyorera 19.04.2 uye KDE Kunyorera 19.04. 3, yakarongerwa June 6 uye Chikunguru 11, 2019, kana nhepfenyuro ichisvika kumagumo ehupenyu hwayo hunobatsira.
Iyo yekupedzisira vhezheni ichave yakagadzirira muna Kubvumbi 18
Pakupedzisira, nezve izvo zvinotarisirwa pakarenda yeiyi vhezheni Zvakarongwa Anosunungurwa Mubati (RC) naApril 4 y kuburitswa kwekupedzisira kweKDE Zvikumbiro 19.04 kwaizosvika muna Kubvumbi 18 yegore rino.
Iyi purogiramu inogona kuzadzikiswa, chero bedzi vanogadzira vasingamhanye mune chero nyaya dzekuita kana kukanganisa zvakanyanya kuvimbika kweKDE Kunyorera 19.04.
Pasina zvimwe zvekutaura, ini ndinogona kungo wedzera kuti kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo kana uchida kuziva kuti ungaedza sei iyi beta vhezheni, unogona shanyira chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » KDE Kunyorera 19.04 yatove mubeta yekuyedzwa
Linux Kernel 4.20 inosvika kumagumo ehupenyu, kusimudzira kwakakurudzirwa